Teny faran’izay manan-danja iny ary tsy ho afa-bela fa ho adinin’ny tantara amin’iny fanambarany iny ny filoham-pirenena raha sanatria mitsefotra tsy araka izay fampanantenana mipoapoaka nataony no tombana ho azo afaka 4 taona sy 3 volana. Nokianina fatratra teo aloha teo ny hoe anjaran’ny tanora izao fa efa tsy namokatra ny dinozaoro politika. Iaraha-mahita anefa ankehitriny ny vokatra nentin’ny 9 volan’ny tanora. Tsy inona akory izany fa tetikasa tsy mety tafainga. Efa noresahana teo ihany moa ny resaka 58 taona ary tsaroana etoana ny fanazavan’ny filoham-pirenena voalohany teto amin’ny firenena tamin’ny 58 taona lasa. Toy ny fanidiana bokotra lobaka, hoy izy izay, ny mitondra firenena ka rehefa diso ny eny an-tampony dia diso hatramin’ny farany io. Hita ho mihatra amin’ny fitondrana ankehitriny izany resaka bokotra diso fanidy izany ary tsy mahagaga raha tsy mety tafavoaka amin’ny fahasahiranana isika vahoaka. Sarotra tokoa ve ny nanazava dieny tany am-boalohany tamin’ny vahoaka ny tena zava-misy marina sy ny fahafahan’izao fitondrana izao eo am-pelatanany ? Marina fa fahendrena malagasy ny hoe manao tifi-danitra mba hahavoa tendrombohitra saingy mila tsaroana kosa anefa fa tsy afaky ny ho avotry ny mazia mazia na oviana ny firenena izay misy fahataram-pandrosoana 58 taona, araka ny voalaza.